IP Camera Ikuku, IP Camera Security, Smart ese foto - InterHome
Anyị tọrọ ntọala na 2011, bụ otu n'ime ndị na-eduga Nche na Smart Home Products emeputa ke China.
Panoramic Lens Ịnọgide 360⁰ surveillance; captures ihe niile na ubi nke na-ele
100% Waya-Free, FHD1080P IP Camera 6700mA 2pcs 18650 rechargeable batrị Battery Njikere oge: 10 ọnwa Battery Iji oge: 4 ọnwa (ugboro 10 akpalite / ụbọchị) 8m PIR, 10m Iye Day / Night, IP65 waterproof, APP: Cloudedge
Model NO. iHS-WF200MP1 Camera Akụkụ 1MP Mkpebi & Chipset 1MP: GK7102 + GC1034 2MP Mkpebi & Chipset 2MP: GK7102 + GC2053 3MP Mkpebi & Chipset 3MP: NT9851X + SC4236
Anyị nwere olileanya ọbọ Win-Win imekọ ihe ọnụ na ị.
Anyị na-enye elu-edu, na-eri-irè ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa gburugburu ụwa
InterHome bụ gị tụkwasịrị obi na onye òtù ọlụlụ na home na akpaaka ngwaọrụ, usoro, nkà na ụzụ, na ndị ọzọ. na-na anyị ọhụrụ ọdịnaya na-atụ anya na-amalite azụmahịa na gị taa.
Anyị na-tọrọ ntọala na 2011, otu n'ime ndị na-eduga Traditional CCTV Security Manufacturer na Shenzhen obodo, China. Na technology na-emekarị nke ụlọ ọrụ & ahịa mkpa, anyị na ugbu a tumadi na-emepụta Smart Home Security Products, na-arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ ahịa, gụnyere ndị isi e-azụmahịa ikpo okwu egwuregwu dị ka Amazon, Newegg, Fipkart ... ect.
Anyị nwere olileanya na iji nweta Win-Win Cooperation gị.
6 / F, Nke 2, Building A, Dezhong Industrial Park, Shi Bei Road, Bantian, Longgang Dist., Shenzhen, China
7 Days a izu si 9:00 am na 6:00 pm
mkpu System , Baby Nyochaa , Google Smart Camera Kit , Security Camera Or Doorbell, WiFi Cctv Camera Kit , Wifi Camera,